Volla Runhare, Ubuntu Bata runhare runoenderana neApple | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo chero munhu anofonera hobbyist anofanira kuziva, pane maviri chete sarudzo izvozvi chaizvoizvo inoshanda maererano nemaitiro ekushandisa: Android uye iOS. Kana izvi zviri izvo, zvinonyanya nekuda kwekushandisa kunowanikwa, nekuti muGoogle Play neApple Chitoro tinowana zvese zvaunoda zvemafoni, asi kune mamwe masisitimu anoshanda senge Ubuntu Bata. Dambudziko nderekuti Ubuntu Kubata hakugone kushandisa akawanda anozivikanwa mafoni ekushandisa, ndosaka vazhinji vagadziri vachisarudza Android senge inoshanda sisitimu. Volla Runhare Iwe zvakare unoronga kusarudza Google's system, asi neimwe nzira.
Asi ngatitangei pakutanga: Volla Runhare parizvino chirongwa, zano. Kufanana nevamwe vazhinji, iri kutsvaga mari uye kuzivikanwa Kickstarter, uko zvakare vane vhidhiyo yekuratidzira. Kana mushandirapamwe ukabudirira, chishandiso chinenge chichitora gore kuti chiuye uye zvikamu zvekutanga zvichave zviripo Gumiguru 2020.
Volla Runhare: Ubuntu Kubata uye Android pane imwe foni
Nezvataurwa pamusoro apa, Volla Runhare runhare runobva paiyo Android Open Source Project (AOSP) uye iyo inovimbisa kuchengetedzeka kukuru uye kuvanzika mune chishandiso chiri nyore kushandisa kwekushandisa kwezuva nezuva. Kune vagadziri, Jörg Wurzer anodaro inotsigira dzimwe nzira senge Ubuntu Kubata kana Nemo Nhare.
Pakati pe "mabasa" akanakisa ayo Volla Runhare ichasanganisira isu tichava neyayo mutengo we $ 300. Chingasave chinosetsa kune vamwe vashandisi ndechekuti icho hachizotsigire zviri pamutemo Google mafomu kana chishandiso chayo chitoro, asi chinokwanisa kuisa akawanda eApplication mafomu kuburikidza neasina kuzivikanwa App Store. Kune rimwe divi, iyo Volla Runhare ine VPN yakagadziriswa nekutadza uye inovimbisa kusatora chero dhata redu kana kutevedzera maitiro edu.
Mazuva ano mafoni efoni anoda nguva yedu nekutarisisa. Kazhinji ziviso dzinotikanganisa uye kutipedzera nguva yedu nemaapplication asingaverengeke. Zvimiro uye kushandiswa kuri kuwedzera kuomarara. Yedu Volla foni ndiyo imwe nzira kune izvo zvese. Panzvimbo pezvishandiso, vanhu uye zvemukati ndizvo zvinotariswa neako mushandisi interface. Kureruka kwepeni uye bepa kwaive kurudziro uye kumisikidza chiyero cheiyi foni nyowani. Iyo Volla foni ichakubatsira iwe kuwana yakawanda nguva muzuva uye kukubvumidza iwe kuti utarise pane izvo zvinhu izvo zvakakosha chaizvo kwauri.
Volla Runhare yakazvimisira pachayo chinangwa chekusimudza € 350.000 kuenda kumberi. Ungave uchifarira foni yakaita seiyi, pamutengo wakadzikira, uri nyore kushandisa uye usina Google Play / Apps?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Volla Runhare chirongwa cheiyo Android foni inoenderana neUbuntu Runhare
Francisco Pintaluba akadaro
Zvinondinakidza sekureba kwandinogona kusarudza kuti ndeapi maapplication ekuisa pairi.
Pindura kuna Francisco Pintaluba
Microsoft Defender ATP antivirus iri kuuya kuLinux gore rinouya